War Culus: nin magafe ah oo dalka Italy si xun loogu garaacayo suuqa dhexdiisa..tolow wa ayo cidda qabatay? daawo sawirada | Gaaroodi News
Soomaali isa soo aruursatay ayaa waxa ay soo ogaadeen in uu dalka Talyaaniga soo gaadhay Mukhalas caan ka ahaa gudaha dalka Liibiya kaas oo dhibaatooyin kala duwan u soo geeystay waliba in mudo ah ku silcin jiray Saxaraha iyo dalka Liibiya .
Mukhalaskaan oo magaciisa lagu sheegay Ismaaciil waxa uu ka tirsanaa kooxda loo yaqaan Magafe ee dadka Tahriibisa waana Soomaali inta badan loo soo adeegsan jiray Soomaalida kale . Dhalinyaro badan oo Ninkan soo weerartay ayaa waxa ay sheegeen in uu ku soo silciyay gudaha dalka Liibiya ayna Maxkamad la kori doonaan .
Ninkan Mukhalaska ah oo maalin cad lagu dhex garaacay magaalada Milano ayaa waxaa kiiskiisa la wareegay ciidamada Booliiska dalka Talyaaniga kuwaas oo baadhitaano hor dhac ah ku haya , waxeyna sii kaxeeysteen dhalinyaro fara badan oo Wiilal iyo Gabdho iskugu jira si ay Maxkamada uga hor cadeeyaan dambiga loo heesto Ismaaciil Magafe.